“Chelsea is Back.”. -Hazard oo Digniin u diray Barcelona kaddib guushii xalay – Gool FM
“Chelsea is Back.”. -Hazard oo Digniin u diray Barcelona kaddib guushii xalay
(London) 13 Feb 2018. Eden Hazard ayaa digniin u diray Barcelona kaddib guushii ay xalay ka gaareen West Brom oo uu labo gool ka dhaliyay.
Blues ayaa marti galin doonta Barca lugta hore ee wareega 16-ka Champions League ka hor inta aysan lugta labaad ku soo ciyaarin Nou Camp.
Laacibka reer Belgium ayaa ka dhawaajiyay in Chelsea ay soo laabatay kaddib labadii kulan ay guul darada la kulantay dhawaan isagoona sheegay inay diyaar u yihiin inay dhibcaha ka qataan kooxda reer Spain.
“Dabcan waxaan muujinay jawaab celin, si fiican ayaana ku sameynay taageerayaasheena hortooda,” Hazard ayaa sidaa u sheegay Sky Sports kaddib guushii xalay.
“Markasta way fiican tahay inaad ciyaarto kulan ceynkan oo kale ah iminkana waxaan leenahay labo kulan oo aan ku wajaheyno Hull iyo Barca. Diyaar ayaan nahay.
“Waqti fican nooma ahan maxaa yeelay waxaan guul darreysanay labo kulan balse iminka waan soo rogaal celinay, Chelsea ayaan nahay, Waxaanahay ku guuleystayaasha Horyaalka waana inaan bixinaa wax kasta.”.
Philippe Coutinho oo dib ugu soo laabanaya Liverpool bisha June (Ogoow sababta)
Patrice Evra oo Qoob ka ciyaar ku dhex Camirtay wadooyinka London kadib markii uu dib ugu soo laabtay EPL (SAWIRRO IYO MUUQAAL)